Isixazululo se-Backlighting Solutions - I-Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Kuyini Laser Etching?
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izinkinobho zerabic ze-silicone zivame ukufakwa i-laser ukuthuthukisa imiphumela yokukhanya emuva. Nge-laser etching, kusetshenziswa i-laser enamandla amakhulu ukukhetha ukunyibilika nokukhipha upende ezindaweni ezithile zesendlalelo esiphezulu. Lapho usuvele upende, ukukhanyisela emuva kuzokhanyisa ikhiphedi kuleyo ndawo.
I-Laser etching isebenza kuphela, noma kunjalo, uma ikhiphedi yerabha ye-silicone inokukhanya emuva. Ngaphandle kokukhanyiselwa emuva, indawo noma i-laser ebekwe nge-laser ngeke ikhanyiswe. Akuzona zonke izinkinobho zerabic ze-silicone ezine-backlighting ezifakiwe nge-laser, kepha zonke noma izinkinobho ezinjoloba ezinjengo-silicone ezenziwe nge-laser zifaka ukukhanyiselwa emuva.
Ngakho-ke, iziphi izinzuzo (uma zikhona) ezinikezwa yi-laser? Okokuqala, kuvame ukusetshenziselwa ukukhiqiza umphumela onamandla we-backlight ngokukhanyisa izinganekwane kuphela. Lo mphumela ungakhula ngokuhlanganisa i-laser etching ne-light-emitting diode (i-LED) backlighting, okuholela ezinhlakeni eziningi zemibala egqamile.